आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २७ गते बुधबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २७ गते बुधबार
साउन २७, २०७८ ०५:१४ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण २७ गते बुधबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त ११ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणशुक्लपक्षको तृतीया तिथि वेलुका ५:०८ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्थी रहनेछ ।
मेष : आफन्तजनको सहयोगले कार्यलाई अघि बढाउँदा सफल भइनेछ । बौद्धिक क्षमताको विकास हुनेछ । नोकरीमा प्रसंसा एवं जिम्मेवारी बढ्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुनेछ । स्वास्थ्यमा समेत सुधारको संकेत देखिन्छ ।
वृष : ढिला सुस्तिका कारण विशेष अवसर फुत्कनेछ । मानसिक तनाब बढ्नेछ । विवादित कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्दा दिक्क लाग्नेछ । गोपनीयता बाहिरीँदा विपक्षीले स्थान पाउने छन् । दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनुहोला ।
मिथुन : कलात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ । मित्रजनको साथ सहयोगले गर्दा नयाँ कार्यको आरम्भ हुनेछ । शुभ खबर सुन्न पाइनेछ । व्यापार व्यवसायमा आयदर बढ्नेछ । समग्रमा दिन हर्षाेल्लास पूर्वक वित्ने देखिन्छ ।
कर्कट : बोलिकै भरमा काम बन्नेछन् । धार्मिक कार्यमा सहभागी भइनेछ । सामान्य प्रयासमा काम बन्दा हौसला थपिनेछ । थालेका कार्यले दिगोरुपमा लाभ दिनेछन् । आफन्तजनसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ ।
सिंह : मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । शत्रु पनि मेलमिलापमा आउँदा काम गर्न सहज हुनेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी हुने मौका मिल्नेछ । कला र गलाको प्रशंसा हुनेछ ।
कन्या : सामान्य कार्यमा अल्झनाले महत्वपूर्ण कार्य ओझेलमा पर्नेछ । स्वास्थ्य समस्या यथावत् नै रहनेछ । जिद्दि गर्ने स्वभावले विवाद हुन सक्छ । आयको तुलनामा व्ययभार बढ्नाले आर्थिक तालमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ ।
तुला : नयाँ ठाउँको भ्रमणले नयाँ ज्ञान मिल्नेछ । कृतिप्रदायक कार्य गरिनेछ । परिश्रमको सही मुल्यांकन मिल्दा हौसला बढ्नेछ । प्रीयजनसँगको रमाइलो भेट हुनेछ । आकस्मिक रमाइलो यात्राको अवसर समेत जुट्नेछ ।
बृश्चिक : व्यक्तित्व विकासको समय रहेकोे छ । कार्य क्षेत्रमा नयाँ जिम्मेवारी बढ्नेछ । मान्यजनको सहयोगले अघि बढ्दा कार्यहरु सहज तवरले बन्नेछन् । सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा बटुलिनेछ । बोलिको कदर हुनेछ ।
धनु : सामूहिक कार्यलाई अघि बढाउँदा नेतृत्व गर्न पाइनेछ । सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रका अपूरा काम बन्नेछन् । ठूला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । सद्विचारको उदय हुनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ ।
मकर : आफ्नै निर्णयले आँफैलाई समस्या निम्त्याउला । दैनिक गर्दै आएका कार्यमा समेत विघ्नबाधा आउनेछ । शारीरिक आलस्यताले कार्य गर्न सकिने छैन । अशुभ खबर सुन्नु पर्नेछ । हतारमा कुनैपनि संझौता गर्नुहोला ।
कुम्भ : सोचे अनुरुपका काम कार्य पूरा हुनेछन् । विपरीत लिंगीको साथ सहयोग मिल्नेछ । शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा समेत सफलता मिल्नेछ । काम प्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । खुसीलायी छाउनेछ ।
मीन : नयाँ अवसरहरुले पछ्याउने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आयदर बढ्नेछ । नोकरीमा सामान्य विवाद भएता पनि जीत तपाईँकै हुनेछ । घरायसी सरसामान जोडिनेछ । रोकिएका वित्तीय कारोवारले गति लिनेछन् ।